Gaalkacyo: Burcad Badeeda oo isku dilay lacagtii ay ka qaateen wariye ajnabi ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Burcad badeed Soomaali oo ku sugan Koonfurta Gaalkacyo ayaa saaka ku dagaallamay lacag madaxfurasho ah oo ay qaateen wariye reer Galbeedka ah, kaasoo ay sii daayeen salaasadii lasoo dhaafay kadib markii ay qaateen lacag dhan $1 Milyan iyo lix boqol oo dollarka Mareykanka ah.
Dagaalka ayaa ugu yaraan ku geeriyooday saddex ruux, waxaana ku dhaawacmay 8 kale oo iskugu jira shacab iyo burcad badeedii dagaalamay.
Saddexda qof ee dagaalka ku geeriyooday ayaa waxaa ku jira sargaal ka tirsan Kooxda Burcad badeeda Soomaalida oo lagu magacaabo Cali Duulaa, kaasi oo caan ka ahaa gobolka Mudug.
Xaalada koonfurta Gaalkacyo ayaa kacsan, waxaana jira xiisad colaadeed oo magaalada laga dareemayo oo u dhaxeeysa burcad badeeda halkaas ku sugan ee saaka dagaallamay.
Cali Duulaa ayaa waxa uu caan ka ahaa Gobolka Mudug, isagoona ku caan baxay arimaha burcad badeeda, waxaana lagu xusuustaa in uu qeyb ka ahaa Afduubkii sanado ka hor burcad badeeda ay u geysteen Markab laga lahaa dalka Ukraine oo siday hub iyo taagiyo.
Waxaa xusid mudan in Cali Duulaa uu ahaa ninkii labadii sano ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay Afduub ahaantana u heystay Machel Scot Wariyihii dalashada Jarmalka iyo Mareykanka heystay ee Maalintii Talaadada ay sii daayeen kooxaha Burcad badeeda.
Sida ay qortay wakalaada wararka AP, qolooyinkii weday wada xaajoodka lagu sii daayey wariye Michael Scott Moore oo heystay dhalshada Mareykanka iyo Jarmalka, waxaa la bixiyey lacag dhan $1.6 Milyan dollar si loo sii daayo.
Wariyahan ayaa maleeshiyaad hubeysan waxey bishii Janaayo ee sannadkii 2012-kii ka afduubteen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana la sii daayey salaasadii lasoo dhaafay.